Mareykanka waxuu weerari doonaa 52 goobood oo Iran laf-dhabar u ah
Tuesday February, 25 2020 - 05:57:21
Sunday January 05, 2020 - 12:22:48 in by salman abdi
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa Iiraan ugu hanjabay in Mareykanku uu qaadi doono weeraro lagu bartilmaameedsanayo 52 goobood oo muhiim u ah Iiraan weliba "si dhakhsiya oo adag".
''Mareykanka ma doonayo caga jugleyn dambe'' ayuu Trump intaasi ku sii daray
Janaraal Qaasim Sulaymaani ayaa waxaa lagu dilay gantaallo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ku rideen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq waxa uuna Trump sheegay in Mareykanku uu u dilay Sulaymaani, si "uu u joojiyo dagaal, ee uusan doonayn inuu mid bilaabo".
Hogaamiyaha Maxkamadda ugu sareyso dalkaasi Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in "aargoosi xanuun badan uu sugayo dambiileyaasha" ka dambeeyay weerarka, iyadoona dhanka kale wasiirka Arrimaha Dibedda ee Iiraan, Javad Zarif, weerarkaasi ku tilmaamay "Ficil argagixiso caalami ah". Ciraaqiyiinta ayaa sidoo kale u baroor-diiqayay geeridii Abu Mahdi al-Muhandis, oo ahaa taliyaha ururka Kataa'ib Xisbullaah oo ay Iiraan baritaarto.
Waxaa jira warar kale oo tibaaxaya in ururkaasi ay cidaammada ammaanka ee Ciraaq ay uga digeen "Iney gabi ahaanba ka fogaadaan xarumaha Mareykanka laga bilaabo galabka Axadda ah", sidaasi waxaa soo weriyay Telefishinka al-Mayaadiin.
24/02/2020 - 11:54:11
24/02/2020 - 11:50:59
12/02/2020 - 09:35:14
Hirshabeelle oo Arrimaha Fatahaadda kala hadashay Qarramada Midoobey iyo Mareykanka
07/02/2020 - 13:33:31
05/02/2020 - 11:04:49
31/01/2020 - 11:20:49